ကိုစိန်ကတော့ ရင်ဘတ်ဟင်းလင်းပွင့်ကြီးနှင့် တဟီးဟီးတဟားဟားပါပဲ။ အေးမတစ်ယောက် ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်ပြောချလိုက်သည့် မနန်းကို ပြန်မပြုံးပြပေမယ့် မမဲ့ပါဘူး။ နည်းနည်းတော့ တွေတွေလေး ဖြစ်သွားသည်။ ဟုတ်သလားလို့လေ။ အခုထက်ထိတော့ ကိုစိန်ကြီးက’အေးသဘော … အေးသဘော’လုပ်နေလေသည်။ အေးကြိုက်တာ ကိုစိန်ကြိုက်နေသည်။ စောင့်ကြည့်ရမှာပါပဲလေ။ မရိုသေ့စကား မနန်းပြောသလို ကလေးတစ်ယောက်ချီရမှ သိရပါပြီဆိုတော့လည်း မအေးမတို့ ဘာများပြင်ဆင်ခွင့်ရဦးမှာပါလိမ့်။ ဟိုတွေးဒီတွေးနှင့် ဈေးဝယ်က ဗူးညွှန့်အဖျားလေးတွေ လက်သည်းဖြင့်ဆိတ်လိုက်၊ ရုံးပတီသီးနုနုလေးတွေ ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ ချိုးဖဲ့လိုက် လုပ်နေသည်ကိုပင် မအေးမတစ်ယောက် မတားမိတော့ပါ။ အားရာရား သီရိမင်္ဂလာဈေးမှာ ရေသန့်ပို့ဝန်ထမ်းလုပ်ရင်း ဥပဒေဘွဲ့ရသွားသည့် သူငယ်ချင်းလေး- ညီငယ်နေ၀င်းအောင် သို့ အမှတ်တရ။
This entry was posted on January 21, 2010 at 12:49 pm and is filed under အနုပညာ.You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leavearesponse, or trackback from your own site.	Navigate
Previous: ဈေးတက်သွားတဲ့ အီကြာကွေး	Next: “စိန်ခဲမြခဲ … ထိန်ထိန်ကြဲ´´	Createafree website or blog at WordPress.com. %d bloggers like this: